उदीयमान शक्तिको मिलन: के गर्दै छ नेपाल ? | Hakahaki
उदीयमान शक्तिको मिलन: के गर्दै छ नेपाल ?
काठमाडौं । २१ औं शताब्दी अब एसियाको नेतृत्वमा रहने ‘भाषा’ लाई पछिल्ला दुई कूटनीतिक घटनाक्रमले आशामा परिणत गरिदिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चीन र दक्षिण कोरियामा भएको फरक–फरक तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले यस्तो आशा जगाएको हो ।
विश्व राजनीतिको नेतृत्व फेरि एक पटक एसियाले लिने सशक्त संकेतका रूपमा यो घटनाक्रमलाई लिइएको छ । केही महिनायता यस क्षेत्रमा अप्रत्याशित कूटनीतिक घटनाक्रम देखा परिरहेको छ । कूटनीतिक भेटघाट र छलफलले तीव्रता पाइरहेको छ । ६ दशकभन्दा अघिदेखि शत्रुवत व्यवहारमा रहेका उत्तर र दक्षिण कोरियाका नेताहरूले संसारलाई नै आश्चर्यमा पारे ।
दक्षिण कोरियामा नयाँ राष्ट्रपति मुन जे इन आएदेखि नै आकलन गरिए अनुरूप दुई कोरियाली नेताको अंगालोले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कैयन् शक्ति मुलुकलाई भने अलमलमा पारिदिएको छ । लगातार आणविक परीक्षण गर्दै अमेरिकालाई आणविक प्रहारको समेत धावा बोल्दै आएको उत्तर कोरियाले अर्को महिनादेखि आणविक परीक्षण नगर्ने घोषणा मात्र गरेन, अब आपसी युद्धसमेत कहिल्यै नगर्ने वाचा दुवैले गरे । जुन अपेक्षाभन्दा निकै अगाडिको विषय थियो ।
सन् २०१९ मा हुने आम निर्वाचनको खपतका लागि मोदीले चीनसमक्ष विशेष सम्बन्ध राखेको तर्कसमेत बाहिर आएको छ । भारतको संसद्मा वर्तमान सरकारको चीन नीति र भ्रमणबारे व्यापक बहसको संकेत देखिएको छ । भारतमा स्वतन्त्रतापछि नेहरूले लिएको नेतृत्वको अवस्थामा झैं पछिल्लो पटक मोदीसँग जोडिएर चीन विषय भारतको बहसमा आएको छ ।
चीनलाई यस क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा प्रवेश नै दिन हुँदैन भन्ने शक्तिको वर्चस्व भारतमा अझै रहेकाले मोदीलाई सहज भने छैन । चीन पुग्ने निर्धारित अर्को कार्यक्रम हुँदाहँुदै अचानक भ्रमण तय गर्दै मोदीले अनौपचारिक रूपमा चीनकै अर्को सहर उहानको भ्रमण गर्नु र भेटघाट हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यस क्षेत्रका साना मुलुकले चीनलाई भारत र भारतलाई चीन देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् ।
कतिपयले व्यक्तिगत स्वार्थसमेत । यी दुई शक्तिकै मिलनले त्यो विषयमा भने फरक अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छ । चीनले सार्कमा समेत चासो राख्दै आफूलाई सदस्यसरहको हैसियत मागिरहेको अवस्थामा यसले केही प्रगति हुन सक्ने देखाएको छ । बेलायत र चीन तथा अन्य युरोप र चीनको सहकार्यमा पनि नाटकीय रूपमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ ।